NOSY BE : Nahitana fatina trozona mirefy 11 metatra natsingevan’ny rano ny talata teo
Nahitana fatin-janaka trozona izay tombanana ho 11 m ny halavany ary milanja eo amin’ny 3t tao Nosy Be eo ny talata teo. 10 décembre 2020
Natosiky ny onja teny amin’ny faritra Matsinja ny fatin’ity zanaka trozona ity. Vao nahare ny zava-misy ny Ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Nosy Be, Vita Gilbert dia nidina teny an-toerana niaraka tamin’ireo mpamonjy voina. Araka ny filazan’ny eo anivon’ny CNRO sy ireo tompon’andraikitra misahana ny jono ao an-toerana efa herinandro eo ho eo no maty ity hazan-dranomasina lehibe ity izay efa simba tanteraka.
Namoaka fanambaràna ny Ben’ny tanàna Vita Gilbert mandrara ny fakana menaka na fihinanana ny henan’ilay trozona satria tsy fantatra ny antony nahafaty azy. « Aoka isika vahoaka ho mailo tsy haka ny menak’io trozona io na hihinana ny henany. Misy mantsy milaza fa fanafody ny menaka trozona. Iaraha-mahita anefa fa efa simba tanteraka ity biby ity ary tsy fantatra ihany koa ny tena antony nahafaty azy », hoy i Vita Gilbert.
Marihina fa anisany biby arovana ny trozona ary mahasarika ny mpizahatany. Araka ny nambaran’ireo teknisiana, amin’ny fotoana firaisan’izy ireo sy fiterahana dia miala ny faritra mangatsiaka mankany amin’ny toerana mafana ny trozona. Izay ny antony ahitana azy ireo aty amintsika amin’izao fotoana izao. Nodoran’ny tompon’andraikitra ny fatin’ilay trozona, omaly mba hisorohana ny tsy fanarahana ny fanambaràna nataon’ny Ben’ny tanàna ny amin’ny tsy tokony hihinanana azy.